Tsy laharam-pahamehana ho an'i Mozilla intsony ny Thunderbird, ny telefaona finday dia | Avy amin'ny Linux
Tsy laharam-pahamehana ho an'i Mozilla intsony ny Thunderbird, ny telefaona finday kosa
Efa antsasaky ny bilaogy no nanako ny fanambarana nataon'i Mozilla momba ny hoavin'ny mpanjifanao mailaka, ary tsy ho an'ny kely kokoa, raha ny fanovana izay ho avy dia mety tsy hahomby amin'ny ampahany amin'ny Foundation.
Tsotra be ilay lohahevitra, Thunderbird dia tsy dia zava-dehibe noho ny vokatra faneva manaraka an'ny Mozilla: Firefox OS. Heverin'izy ireo izany Thunderbird Izy io dia vokatra azo antoka ary vita ary tsy mila fanavaozana ny filaminana fotsiny, miankina amin'ny "Community" ho an'ny sisa amin'ireo fanavaozana azo atao izay azo ampiana amin'ny kinova ho avy. Araka ny naoty ofisialy:
…. Misy fanontana roa an'ny Thunderbird amin'izao fotoana izao: "Thunderbird '" sy "Thunderbird ESR". "Thunderbird" ihany no ho tratry ny fiovana:
Misy kinova vaovao an'ny Thunderbird ESR amin'ny 20 Novambra 2012. Araka ny voafaritry ny drafitra Thunderbird ESR (http://www.mozilla.org/thunderbird/organisations/faq/), dia handova ilay endri-javatra napetraka ankehitriny ao amin'ny Thunderbird. Ity kinova ity dia havaozina isaky ny enina herinandro, mandritra ny vanim-potoanan'ny tsingerin'ny ESR hiantohana ny filaminana sy fitoniana mety indrindra ho an'ireo fikambanana…
.... Mozilla dia mbola hanohy hanome mpiasa, logistika ary fotodrafitrasa karama ho an'ny ekipa famoahana mba hamokatra fanavaozana sy kinova vaovao manana ny haavon'ny kalitao ihany anio. Hotohizan'ny vondrom-piarahamonina Thunderbird ny fanohanana ary hanohy hanome fotodrafitrasa ilaina i Mozilla.
Raha manontany ahy ianao dia tsy ho hitako izay holazaina. mihevitra aho fa Mozilla dia manao vivery ny ainy amin'ny fametrahana azy eo am-pelatanan'ny Firefox OS, izay amin'ity ora ity, tsy ho fantatsika raha hanome ny vokatra andrasana izany raha efa misy ny fifaninanana matanjaka eo amin'ny tsenan'ny finday Android, iOS sy ny sisa tavela eny an-dalana. Ny tiana holazaina dia, toa ahy izany Thunderbird tsy dia voadio araka ny voalazany.
Izy io dia rindrambaiko mila fitandremana tsy tapaka. Azon'izy ireo atao, ohatra, ny manome ny interface ho an'ny interface, mba hanome azy io ho mahasarika toa ilay ananany Opera Mail, ohatra. Fa tsy misy, ho hitantsika ny zava-mitranga. Ho hitantsika eo raha Mozilla Tsy diso izy, ary na dia misy aza izy dia afaka miantehitra foana isika safidy hafa (na dia tsy matanjaka aza) hitantana ny mail anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Tsy laharam-pahamehana ho an'i Mozilla intsony ny Thunderbird, ny telefaona finday kosa
Manana kaonty mailaka 5 na 6 koa aho ary Thunderbird no mpanjifa tiako indrindra. Tsy mandresy lahatra ahy tanteraka i Kmail, ary tena tsotra ny client an'ny Opera. Fa hey, raha tsy misy safidy afa-tsy ny milamina amin'izay misy dia tsy misy. Mampalahelo fa avelan'izy ireo ho avela ilay tetikasa.
Tsy afaka nanao an'ity karazana rindrambaiko ity mihitsy aho, heveriko satria efa zatra namaky ny mailaka nataoko avy amin'ny mpitety tranonkala, saingy nanana fotoana hanandramana safidy hafa aho amin'ity raharaha ity, ary mila milaza aho fa Thunderbird no feno indrindra tamin'ny tsiroko. Mozilla dia tandindomin-doza be amin'ity rafitra fandefasana finday ity. Manantena aho fa mety aminao io, ary ny tena zava-dehibe kokoa aza, antenaiko fa tsy hanao ambanin-javatra ny fampandrosoana ny Firefox ianao
Toy izany koa no mitranga amiko. Na dia talohan'ny nifindrako tany Linux aza dia tsy nampiasa client email intsony aho. Nojereko tamin'ny Internet ny zava-drehetra.
Andramo ny fananana kaonty mailaka toa ahy 10 eo ho eo, hahitako raha tena mampahazo aina anao ny manatona azy ireo avy amin'ny tranokala, tsirairay.
TPT!! ... Tsy tonga amin'ny 10 aho, fa toy ny 5 na 7 izy ireo.
Manaiky tanteraka an'i Manuel, maro ihany koa ny olona no manadino fa ny Thunderbird dia iray amin'ireo vitsy (raha tsy izy irery ihany) orinasam-pifandraisana amin'i Outlook satria sehatra hafa.
Marina izany 🙁
Eo am-pamonoana vitsivitsy aho, saingy farafaharatsiny mba hanana 5 na 7. Kaonty manokana sy daholobe, ho an'ny varotra elektronika sns.
Ny azo antoka dia tsy hijanona amin'ny iray monja aho, noho izany dia mpanjifa toa an'i Thunderbird no tena ilaina amiko.
Tena manana aho:
- Kaonty 3 na 4 ao amin'ny GMail.
- Kaonty 4 na 5 ao amin'ny GMX.
- Kaonty 1 ao amin'ny Yahoo!
- Kaonty 2 amin'ny adiresy mailaka.
- Kaonty 2 ao amin'ny MyOpera.com
- 1 ao amin'ny FromLinux.net
Avoahy ny faktiora hahahaha.
Inona no tsy ampiasain'ny maro, na alefa amin'ny mailaka iraisana na lehibe ny mailaka.
Reny masina xD, kaonty mailaka firy! . Tsy manana afa-tsy 4 aho, ny iray avy amin'ny hotmail, ary ny 3 avy amin'ny gmail (ny iray amin'izany dia ny mailaka andrim-panjakana ao amin'ny anjerimanontolo) .Fa eny, zava-dehibe ho ahy ny mampiasa Thunderbird tsy hoe hamaky azy rehetra amin'ny toerana iray fotsiny fa hikaroka haingana koa mandefa mailaka indray mandeha indray mandeha.
HAHAHA eny ... fa raha ny marina dia iray ihany no ampiasaiko (FromLinux)
Ny sisa amin'ny kaonty dia alefa eo anelanelany, ary amin'ny farany ny mailaka rehetra dia mankany amin'ny kaontiko lehibe 😀
Ny tanjoko amin'ny fananana kaonty mailaka be dia be dia ny hampihenana ny risika. Tsy adala aho raha hampiasa ilay kaonty mitovy amin'ny PayPal na Dropbox izay ampiasaiko ao amin'ny Messenger na hanao sonia bilaogy, ohatra. Alain'izy ireo amiko izany ary mamono tena aho. o_O
Tsy manana kaonty telo fotsiny aho: ny iray amin'ny gmail, ny iray amin'ny mailaka ary ny farany any Costa Rican.cr. ny rehetra, ny voalohany ihany no ampiasaiko, ary saika hakatoko ilay hotmail satria tazomiko ho an'ny messenger (izay tsy nampiasako nandritra ny fotoana kelikely)
Ary faly indray aho nisafidy ny KMail ary nijanona tsy nampiasa Thunderbird.
marina. Nandramako izany tamin'ny fotoanako niaraka tamin'ny Ubuntu ary tsy afaka nifanaraka tamin'ny fanovana, dia nilavo lefona aho.
Raha hamela ny asa rehetra ao amin'ny fiarahamonina izy ireo dia aleo mandray anjara amin'ny Icedove izay vondrom-piarahamonina tanteraka fa tsy Thunderbird manana an'i Mozilla ny marika.
Fantatro fa tsy mahazaka ireo tetik'asa tazominy i Mozilla ary ny OS vaovao miorina amin'ny B2G ho an'ny finday no laharam-pahamehana vaovao. Mahagaga fa toa tsy fanapahan-kevitra adaladala toa ahy io, mpampiasa Thunderbird aho hatramin'ny nampiasako ny Windows, tokony ho 3 taona ary hitako ny fivoarany lehibe, saingy miombon-kevitra amin'i Mozilla aho fa rindrambaiko somary feno io, faly aho miaraka amin'ny fampiasa lehibe ananany ary toa tsy mila fiasa vaovao aho. Hadinonao ihany koa ny nanonona an'i Elav fa tsy fanapahan-kevitra feno io, satria hohenoina hatrany ny mpampiasa, satria izany no lisitra fandefasana mailaka:
>> Manantena ny hahazo ny fanontanianao sy ny hevitrao momba ity drafitra ity izahay. Tianay ny manadio azy mandritra ny fahavaratra mba hahafahanay mifanakalo hevitra momba ny antsipiriany farany amin'ny fiandohan'ny volana septambra 2012. Raha te-handray anjara amin'ity adihevitra ity ianao dia miangavy mba hampiasa ny lisitry ny mailaka mandrindra tb (https://wiki.mozilla.org/Thunderbird/tb-planning) amin'ny maha forum dinika.
Raha marina ny anao, fa raha tena niahy ny fanapahan-kevitr'ireo mpampiasa izy ireo, dia ho nanao ny fanambarana raha vao nisy marimaritra iraisana fa tsy teo aloha.
Eny, ho ahy izany dia iray amin'ireo mpitantana mailaka tsara indrindra nampiasako. Ny vahaolana hafa rehetra dia mbola tsy naharesy lahatra ahy velively, na noho ny fitoniana na ny fahasarotana rehefa nanangana ny kaonty. Thunderbird dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo mora ampiasaina indrindra.
Io ilay ampiasaiko isan'andro. Tena ratsy dia nila nanao ny menio thunderbird mitovy amin'ny firefox izy ireo. Efa nitady client email aho fa tsy nisy naharesy lahatra ahy toa an'i Thunderbird, izaho koa efa ela vao nianatra nanoratra ny anarany ary tsy nahazo fanampiana hahaha ...
Mieritreritra aho fa hitady fomba hafa hisolo tena azy, fa ny ilaiko dia ny gtk na mety ho an'ny QT ihany koa, fa ny tsy tiako dia ny misintona ireo fiankinan-doha KDE hampiasa Kmail ihany.
Ary efa nanandrana an'ity ve ianao?
Lex.RC1 dia hoy izy:
Thunderbird dia toa ahy ho mpitantana mailaka tena tsara miampy ny fanitarana azy, mahamenatra ny manary tetik'asa matotra nefa mety hihatsara. Na dia heveriko fa tsy noho ny Firefox OS fotsiny, dia misy antony hafa mety hisy fiantraikany amin'io fanapahan-kevitra io. Tsena somary ambany mpampiasa ary manana fifaninanana betsaka. Ny ankamaroan'ny birao dia manana mpitantana tsara. Ny Icedove tohanan'ny vondrom-piarahamonina Debian lehibe.
Tsy nampiasa nandritra ny fotoana kelikely aho, mampiasa Evolution izay mpitantana tena tsara ihany koa ary manararaotra ny fampidirana amin'ny birao izay tsy omen'i Thunderbird ahy.
Valiny amin'ny Lex.RC1
Ananako io ary tsy ampiasaiko akory, tsy dia ampiasaiko loatra ny mail ^^
Mila fanampiana ny feso
Ahoana ny fandokoana ny syntax amin'ny VIM